Sirni awwaalchaa haadha Jaal Daawud bakka maatii fi firoottansaanii argamanitti gaggeeffameera. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSirni awwaalchaa haadha Jaal Daawud bakka maatii fi firoottansaanii argamanitti gaggeeffameera.
Sirni awwaalchaa haadha Jaal Daawud bakka maatii fi firoottansaanii argamanitti gaggeeffameera.
Nagaan biqodhu haadha gootaa!
Miseensi Adda Bilisummaa Oromoo beekkamaan Jaal Seeyfuu Muummee Caamsaa 15,2020 biyyaa Amreekaa kutaa Nebraska keeysatti du’aan addunyaa kana irraa booqatan.
Jaal Seeyfuu Muummee CORONAVIROS COVID-19n qabamuu irraan kan ka’een torbaan 3 guutuu Hospitaalaa Nebrasaka keeysatti kan wallana’amaa ture hoggaa Caamsaa 15,2020 waaree boodaa du’aan addunyaa kana irraa booqateeti jira.
Jaal Seeyfuu Muummee Qabsoo Bilisumnmaa Oromoo keeysatti nama shoora ol-aanaa gumaachaa ture hoggaa tahu inni Abbaa joollee 11ti. Haajii Seeyfuu Muummee guyyaa boruu jechuun Caamsaa 16,2020 biyya Amreekaa Kutaa Nebraskaatti kan awwaalamuu jiraatu tahuu inatalti isaa Aaddee Ifraah Seeyfuu Muummee nutti himteeti jirti.
Madda: Hegere Media Network
Obboleettiin goota keenyaa galata guddaa qabdi; galata ishii jechaan ibsuun rakkisaa dha; ba’aa ulfaataa silaa angafti baatu baattee jiraatte; imaanicha baattee yoonaan geesse! Galanni ishii bilisummaa Oromoo haa ta’u!!
Lammiin keenya sirna awaalcha harmee keenaya miidhagsitan ulfina bara baraa argadha!
Sirna Awwaalchaa Harmee Alamii Gaarii (1927-2020)
Harmeen HD ABO Jaal Daawud Ibsaa ayyaantuu dha; rakkoo hamtuu keessa darban; guyaan kun eebbaa Waaqaan ta’e!
Gootni isaan saba keenyaaf kennan, lubbuun jiraatee, ijaan isaan argee, qe’ee dhalootaa, Ujuba ganamaatti sirnaan awaalamuun milkii guddaa dha.
Har’a hundi keenya haadha gootaa dhabuu keenayan ni gaddina; ammoo duuti kennaa uumaa uumamaa ti; morminee dhaabuu hin dandeenyu.
Guyyaa kan HD keenya cina dhaabbachuun sirna awwaalchaa harmee keenaya waan nuuf abreechitaniif, Galata guddaa argadha!
Ardaa Horro Guduruu, Shaambu, Abunaa, aayyoo keenya nagaan nuuf simadhu!!
Ujuba Harmee Alamii Gaarii (1927-2020) irratti Siidaa yaadannoo ni ijaarra!
Harmee Gootaa, Ad Alamii Gaarii (1927-2020)
Barayyuu isin yaadanna!
Lubbuun keessan Nagaan Haa boqoatu!
Ad Alamii Gaarii 1927-2020)-You will always be in our heart.
(SQ, 16 Caamsaa 2020) Gaggeessaa Harmee Alamii Gaarii (1927-2020)
Ad Alamii Gaarii harmee HD ABO Jaal Daawud Ibsaa turan,
Harmee Alamiin ilmaan shan godhatan; ka duraa Maarituu Ibsaa, Itti aansuun jaal Magarsaa (Daawud) Ibsaa Ayyaanaa, Tolasaa Ibsaa Ayyaanaa, Do’ii Ibsaa Ayyaanaa fi Faqqadaa Ibsaa Ayyaanaa horatan.
Ilmaan isaanii keessaa namoonni 2 lubbuun hinjiran. 3 amma iyyuu ni jiran, Jaal Daawud, Do’ii fi Faqqadaa.
Sirni awwaalcha Harmee H/D ABO Jaal Daawud Ibsaa, Aadde Alamii Gaarii har’a Caamsaa 16,2020 Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Horroo ganda Abuunaatti raawwate.
Kun sirna Gaggeessaa Harmee HD ABO Jaal Daawud Ibsaa yoggaa manaa kaafamanii ti.
Madda: Sagalee Qeerroo
‘DAADHII GALAAN’ Weellee Isaa Haaraa
ሰበር ዜና ቅዱስ ሲኖዶስ ቤ/ክ እንዲከፈት ወሰነ
NEWS: UNLAWFUL ARRESTS REMINISCENT OF ETHIOPIA’S UNCHANGED POLITICS: OLF CHAIRMAN